🥇 ▷ Tropico wuxuu yimid Android si uu u noqdo hogaamiyaha jasiiradda Caribbean ✅
Tropico wuxuu yimid Android si uu u noqdo hogaamiyaha jasiiradda Caribbean
Tropico waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee loo yaqaan ‘franchise swing’ ee PC. Hadda waxaan ku heysanaa Android si aan ugu raaxeysanaano sidii ciyaar qaali ah oo gaareysa 12.99 euro. Caqli ahaan ma heli doontid wax micropayment ah oo ah tiradaas sarreysa.
Markii aynaan caado u lahayn in aan wax badan ku bixinno ciyaar, taageereyaasha muusigaan oo aan soo jeedinay in aan u noqdo hogaamiyaha jasiiradda Caribbean, waxaa hubaal ah in ay dhowaan ku dhici doonaan jasiiradooda si ay ugu raaxaystaan ​​sidii ay uga heleen PC-yada. Iyo kor ayaa si buuxda loogu habeeyay Android.
Tropical sida PC
Tropico way awoodeen inay na qaataan waayo-aragnimada ka qaadashada jasiirad iyo ahaanshaha Hogaamiye, waxyaabaha xunxun iyo kuwa wanaagsanba, oo ka yimid dad ina farxiya. Hogaamiye cusub oo la soo doortay, waa inaad awood u yeelataa inaad uga faa iideysato kheyraadka jasiiradda isla markaana aad ogaato awooda weyn ee aad ummadaada ku gaarsiin karto dadka kale.
Ciyaar ay khariidadu u egtahay 3D oo aan nahay waxa ay noqon lahayd Caribbean Sim City, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin, maadaama Tropico ay tahay khibrad gaar ah lafteeda. Waxaad haysan doontaa dhammaan wixii ah dhismaha magaalooyinka, in kasta oo leh cod siyaasadeed oo ku habboon in aannu qosolno oo aan aragno sida ay dadku awood ugu leeyihiin inay ka soo horjeedaan awaamiirtayada.
Waad horumarin kartaa oo maamuli kartaa labada dhisme, sida wadooyinka iyo dhismayaasha, sida dhinacyadaas oo inta badan la xiriira dadka. Waxaan ula jeedaa, waxaan ka wada hadli karnaa waxa aad kari karto layliga taliska milatariga, siyaasadaha ganacsiga iyo dibedda; Xaqiiqdii waxaan aragnaa qaar isla eg oo mid ka mid ah kulamada ugu fiican ee la sii daayay sannadkan: Rebel Inc.
Ma noqon kartaa hogaamiye aragti fog leh Tropico?
Adiga ayey kugu jirtaa inaad isticmaasho kheyraadkaas si looga faa’ideysto beddelida aad u tagto dalkaaga janno dalxiis mustaqbal dheer, awood warshadeed oo meesha ka saarta cabsida Ruushka ama si fudud dowlad boolis taas oo cabsi ka dhalata muwaadin kasta oo deggan jasiiradda Caribbean-ka.
Hadaan kahadalno siyaasada, anaguna waanu kaaala hadlaynaa Adiga ayaa sameysan doona tirinta doorashooyinka, soo afjaro qodobbada khiyaamada leh ee doonaya inay kugu tuuraan awoodda ama xakameeyaan aragtida dadweynaha; maalmahan dambe uma badna. Dabcan, kuwa ku daba socdaa waa lagu abaalmarin karaa inaad uga mahadceliso sida wanaagsan ee ay u qabtaan kubbadda oo ay dhinacaaga uga shaqeeyaan.
Tropico waxaa loogu talagalay Android inay noqoto deked laga hirgaliyo xoq. Iyadoo interface ah dareen leh waxaad u ciyaari kartaa inaad isleedahay Khibradda PC Dabcan, furitaanka ayaa raadinaya cayayaanka iyo karti-darrida, sidaa darteed waxaan sugi doonnaa cusboonaysiinta si ay u khafiifiyaan
Ciyaar heer sare ah oo ugu fiican
Imaatinka Tropico waxay calaamad u tahay sanadka cusub ee Android, maadaama aan wajahayno qalab siman oo dhismaha saxda ah. Qaddar-xilliyeedku waa hal lacag bixin oo dhammaan waxyaabaha ku jira hal mar. Waxaan ku faraxsanahay in markasta oo aan ku aragno kulanno badan oo sidan oo kale ah oo ku saabsan Android iyo inay heleyso ciyaartoy badan oo ku qarash gareeya euroda si ay u helaan ciyaaro cajiib ah.
A Ciyaarta farsamo ahaan la doonayo in laga baxo taasina waxay ku keentaa khibradda kombuyutarka mobiilkaaga. Isu diyaari sawirada wanaagsan, 3Dkaas oo kuu oggolaanaya inaad ugu dhaqaaqdid aragtida aad rabto oo aad xitaa kula socon karto dhulka si aad u ogaato nolosha muwaadiniintaada kale. Waxaa loo tarjumay afka Isbaanishka waana ku daali doontaa inaad ciyaartid, maadaama aad heysatid toddobaadyo iyo toddobaadyo ciyaar si aad u ogaatid inaad noqon doontid hoggaamiye aad jeceshahay ama mid ka mid ah kuwa la neceb yahay.
Tropico waa mid ka mid ah imaatinka sanadka ee Android wuxuuna na geyn doonaa mishiinka dhismaha kaasoo aan ku caano maleyno magaalada riyooyinkeenna. Haddii aan tan ugu darno wax kasta oo siyaasadeed iyo bulsheed, waxaan wajaheynaa ciyaar u gaar ah oo loo soo saaray nidaamkayaga aan ku shaqeysto ee mobilada. Haddii aad haysato dhowr euro oo la keydiyey, ha raagin inaad ku isticmaasho kulankaan. Kuma niyad jabi doono.